Ogaden News Agency (ONA) – Wararkii ugu dambeeyay ee Xarnta Dhexe naga soo gaadhay iyo maamulkii Degmada xarshin oo Baxsaday
Wararkii ugu dambeeyay ee Xarnta Dhexe naga soo gaadhay iyo maamulkii Degmada xarshin oo Baxsaday
Posted by ONA Admin	/ February 15, 2013
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogaadeeniya gaar ahaan Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo xoogan oo ka dhacay deegaano kamid ah Dalka Ogaadeeniya.
Dagaaladaas ayaa waxay u dhaceen sidan;
13/02/2013 Ceel-caabi oo Qabridahar ka tirsan dagaal halkaasi ku dhex maray CWXO iyo Askarta gumaysiga Ethiopia ayaa waxaa ciidama Ethiopia lagaga dilay 5 Askari waxaana lagaga dhaawacay 4 kale
12/02/2013 Maygaag-weyne oo Fiiq udhow weerar lagu qaaday Askar gumaysi oo halkaasi u timid howlgal ay dadka shacabka ah ku dhibaataynayeen ayaa waxaa lagaga dilay 11 Askari waxaana lagaga dhaawacay 19 kale
12/02/2013 weerar mir ah oo lagu qaaday askarta gumaysiga Ethiopia ee ku sugan magaalada Fiiq ayaa waxaa lagaga dilay 3 Askari waxaana lagaga dhaawacay 2 kale
09/02/2013 Gorayaale oo Dannood udhow waxaa Askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 1 Askari waxaana lagaga dhaawacay 2 kale
05/02/2013 Goora-libaax oo Fiiq udhow dagaal xoogan oo halkaasi ka dhacay waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 7 Askari waxaana lagaga dhaawacay 9 kale
24/01/2013 Dagaal ka dhacay Deegaanka lagu magacaabo Gol-dambas oo Gunagado udhow waxaa Askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 6 Askari waxaana lagaga dhaawacay 4 kale
19/01/2013 Magaalada Gunagado ee gobolka Jarar weerar mir ah oo ku qaadeen NH/CWXO fadhiisin aya gumaysigu ku lahaayeen magaaladaasi ayaa waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 5 Askari.
Wararka ka imaanaya Magaalada Xarshin ee Gobolka Jigjiga ayaa sheegaya kadib markii ay Ciidamaga dabaqoodhiga hawaarintu ku dileen 06/02/2013 Deegaanka Faarax liibaan oo ka tirsan Dagmada Xarshin, nin darawal ahaa oo lugu magacaabi jiray Maxamed Qowdhan Cabdi uu khilaaf xoogan soo kala dhex galay wakiiladii gumaysiga u joogay Magaalada Xarshin iyo Askarta gumaysiga Ethiopia. Murankan oo mudo 6 casho ah soo jiitamayey ayaa ahaa in la keeno ninkii dabaqoodhiga ahaa ee dilay darawalka arintaas oo la isku af garan waayey, waxaana ugu dambayntii ay noqotay inay halkaasi kabax sadeen wakiilada gumaysiga u joogay magaalada Xarshin uu ka mid yahay Gudoomiye ku sheegii Dagmada Xarshin Xirsi Cabdulaahi iyo waxaay ugu yeedhaan hoggaanka nabadgalyada Dagmada Xarshin, waxaana lasheegayaa in ay u baxsadeen dhinaca Soomaaliya gaar ahaan magaalada Hargaysa.
Ma ahan markii ugu horaysan ee ay askarta gumaysiga Ethiopia iyo dabaqoodhiga hawaarintu dilal ka gaystaan deegaanada hoosyimaada Dagmada Xarshin waxayna Bishii September ee sanadkii 2012kii ku dileen Askarta gumaysigu deegaanka lagu magacaabo Cilmi Xirsi 12 qof oo shacab ah kuwaasi oo mid kamid ah ay ahady Dumar.